Kulankii Baarlamaanka oo baaqday & Gudoonka oo canaan u jeediyay Xildhibaanada | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Kulankii Baarlamaanka oo baaqday & Gudoonka oo canaan u jeediyay Xildhibaanada
Fadhigii Golaha Shacabka Baarlamaanka Somaliya ee Ajandaha uu ahaa ka doodista xeer hoosaadka Golaha Shacabka, ayaa maanta baaqday, kadib markii Xildhibaanada Baaralamaanka ay soo xaadiri waayeen fadhiga Golaha Shacabka.
Sharci ahaan Kooramka Xildhibaanada wuxuu ku furmayaa 139 Xildhibaan, balse kooramka maanta waxaa soo xaadiray 120 Xildhibaan, taasi oo suuragal ka dhigi wayday inuu furmo Shirka.
Inta ugu badan Xildhibaanada fadhiga Golaha Shacabka ka maqnaa, ayaa waxa ay yihiin Xildhibaanada Wasiirada ah ee Xukuumadda ka tirsan, kuwaasi oo aanan ahmiyad siinin ka qayb galka fadhiyada Golaha Shacabka.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan, ayaa sheegay inay maqan yihiin oo fasax shacri ah ku maqan yihiin kaliya 12 Xildhibaan, halka 120 ay fadhisay, iyadoo ay maqan yihiin tirada kale ee soo hartay ee Xildhibaanada oo cudur daar aanan soo gudbin.
Gudoomiye Ku xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka Somaliya C/wali Sheekh Muudey, ayaa dhankiisa sheegay in sidaan aanan lagu shaqeyn karin, islamarkaana Xildhibaanada ay iska maqan yihin, isaga oo sheegay haddii Mooshin uu jiri lahaa inay soo buuxsami lahaayeen Xildhibaanada.
“Xildhibaanada marka Mooshin uu jiro bes ayeey soo xaadirayaan kulanka, waxaasna shaqo ma’ahan ee waxaa loo baahan yahay kulamada Baarlamaanka in si sharci ah loo soo xaadiro.” Ayuu yiri Gudoomiye Ku xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka.
Maalmihii ay socdeen dooda dhanka ammaanka ee Magaalada Muqdisho, ayaa kulanka Baarlamaanka wuxuu ahaa mid ay soo buux dhaafiyeen Xildhibaanada Golaha Shacabka Somaliya.